आम नेपाली जनताको मुक्ति चाहेको हो, जनमुक्तिले। आदिवासी जनजाति मात्रै आम नेपाली जनता होइनन्। दलित, मधेशी, मुस्लिम मात्रै पनि आम नेपाली जनता होइनन्। ब्राम्हण, क्षेत्री, दस्नामी र ठकुरी मात्रै पनि आम नेपाली जनता होइनन्। पुरै, पौने तीन करोड जनता आम नेपाली जनता हुन्। कसले भन्यो जनमुक्तिलाई नितान्त जनजातिहरूको मात्र पार्टी हो भनेर रु समाजवादको खोक्रो नारा लगाउनेहरूले रु लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनेहरूले रु नक्कली साम्यवादीहरूले रु या एक तर्फीय सूचना प्रबाह गर्न पल्किएका पत्रकारहरूले रु हो, जनमुक्ति पार्टीलाई केहि जनजाति नेताहरूले बहुजातीय समाजवादू को दर्शनलाई अवलम्बन गरेर पार्टी स्थापना गरेको पक्कै हो ।
के जनजाति नेताहरूले स्थापना गरेको पार्टीलाई जनजातिको पार्टी भन्न मिल्छ रु त्यसो हो भने नेपाली काँग्रेसलाई ब्राम्हण नेताले जन्माएको हो, त्यसलाई ब्राम्हण पार्टी भनौं रु एमालेलाई ब्राम्हण पार्टी भनौं रु माओवादी, राप्रपा लगायत ब्राम्हणहरूले नेतृत्व गरेको सबै पार्टीहरूलाई ब्राम्हण पार्टी भनौं रु जनमुक्ति पार्टीले जातीय उत्पीडनलाई माथि उठाएर समावेशी महान समाजवादको नीति अवलम्बन गर्यो। सदियौंदेखि भाषिक, धार्मिक र साँस्कृतिक रूपमा थिच्चिएर बस्ने आम उत्पीडित
नेपाली समाजलाई मुक्त गर्ने नीति महान समाजवादी हुन्छ कि जातीय पार्टी हुन्छ रु निरङ्कुश, बुर्जुवा, नोकरशाह, दलाल र शोसकहरूबाट सदियौंदेखि पिल्सिएर दासी जीवन बिताइरहेका र बर्गीय रूपमा उत्पीडनमा पारिएका आम नेपाली सर्बहारा जनताको मुक्तिको लागि अढाई दर्जन बर्षदेखि शसस्त्रको माध्यमबाट नभई शास्त्रको बाटोबाट संघर्षशील जनमुक्ति पार्टी कसरी जातीय पार्टी हुन्छ रु के जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी र अल्पसंख्यकरसिमान्तकृत नेपाली समूदायहरू मात्रै बर्गीय उत्पीडनमा परेका छन् रु कर्णाली, सुदुरपश्चिम लगायत नेपालको कैयौं क्षेत्रहरूमा पनि ब्राम्हण, क्षेत्री, ठकुरी र दस्नामीहरू बर्गीय रूपमा उत्पीडनमा परेका छैनन् रु के नेपालका सबै ब्राम्हण क्षेत्रीहरू सम्पन्न छन् रु बर्गीय रूपमा उत्पीडन र ति बिपन्न ब्राम्हण क्षेत्रीहरूलाई सम्पन्न हुने अधिकार छ कि छैन रु तिनीहरूलाई मुक्तिको आवश्यकता छैन रु महान बहुजातीय समाजवाद दर्शनले भाषिक, धार्मिक र साँस्कृतिक रूपमा उत्पीडनमा परेका र नपरेका सबै जातजाति र पक्षहरूलाई समेटेको हुन्छ र छ पनि।
के जनजातिहरूले मात्र आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्नु पर्ने हुन्छ रु ब्राम्हणले आफ्नो संस्कृतू भाषाको संरक्षण गर्नु पर्छ कि पर्दैनरु यद्धपि, एक संस्कृत बिषयलाई मात्र राज्यले प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई पार्टीले घोर आपत्ति जनाउँनु पर्छ। आफ्नो हिन्दु धर्मलाई जोगाइ राख्न पर्छ कि पर्दैन रु पश्चिमी संस्कार र संस्कृतिको बिकृति नेपालमा भित्रिरहेको अवस्थामा त्यसलाई निरूत्साहित पार्दै आफ्नै मौलिकता, संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाइ राख्न पर्छ कि पर्दैन रु यी यावत कुराहरूलाई सम्बोधन र संरक्षण गर्न नेपालमा बहुजातीय समाजवादू को आवश्यकता छ, जसलाई जनमुक्ति पार्टीले नेपालमा पहिलो पटक प्रतिपादन गर्यो।
अब भन्नुस् जनमुक्ति पार्टी कसरी जातीय पार्टी भयो रु जनमुक्ति पार्टीले जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी नीति राज्यले लागू गर्नु पर्छ भनेको छ। के समावेशीता जनजाति, दलित, मधेशी र मुस्लिमलाई मात्र आवश्यक छ रु जनसंख्याको आधारमा नेपालको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्री र ब्राम्हणलाई आवश्यक छैन समावेशी नीति रु काठमाडौँ र झापाको ब्राम्हण क्षेत्रीले मात्रै अधिकार प्राप्त गर्ने र उनीहरूलाई मात्रै सम्पन्न हुने अधिकार नेपालको कुन कानुनमा लेखेको छ रु काठमाडौँका शाहरशाही ठकुरीहरू मात्रै सम्पन्न हुने कर्णाली र सुदुरपश्चिमका ठकुरीहरू अधिकार देखि बञ्चित हुनु पर्ने भन्ने नेपालको कुन कानुनमा लेखेको छ रु कर्णाली र सुदुरपश्चिमका क्षेत्रीहरू सधै बिपन्न भईरहने तर काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लाका क्षेत्रीहरूले मात्रै अधिकार प्राप्त गर्ने भन्ने कहिँ लेखेको छ रु यी यावत विभेदहरूलाई समाप्त पार्न नेपालमा समानुपातिक समावेशी हुनु पर्ने जनमुक्तिले आजभन्दा २५ बर्ष अगाडी उठाएका थिए।
अब कसरी जनमुक्ति पार्टी जनजातिको पार्टी भयो रु तुलनात्मक रूपमा विभिन्न उत्पीडनमा परेका जातजाति, भाषाभाषीहरू, कर्णाली र सुदुरपश्चिमका जनताहरू शिक्षामा केहि पछाडी अवश्य होलान्। तर, उनीहरू किन पछाडी परे, यस प्रति अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ कि छैन रु के राज्यले कर्णाली र सुदुरपश्चिमका जनताले बोल्ने भाषामा औपचारिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ रु मधेशमा बोल्ने मैथली, भोजपुरी, अवधि र थारू भाषालाई त्यहाँको स्थानीय तहमा प्रार्थमिकता दिएको छ रु पूर्वमा बोल्ने लिम्बु र राई, मध्ये क्षेत्रमा बोलिने तामांग र नेवास् पश्चिममा बोलिने गुरुङ र मगरले आफ्नै भाषा लगायत सबै अल्पसंख्यक जातजातिहरूको भाषामा शैक्षिक शिक्षा लिन पाएका छन् रु मानव जातिको वास्तविक पहिचान भनेको उसको भाषा हो।
उसको धर्म हो र उसको संस्कृति हो। उसको भाषालाई नै दमन र समाप्त गर्ने कार्य २५० बर्षदेखिको एकात्मक राज्यसत्ताले गर्यो। अब नेपालमा बोलिने सबै भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई प्रयोग गर्ने अधिकार राज्यले गर्नु पर्छ र त्यो पहिचान सहितको सङ्घीय व्यवस्थाले मात्रै सम्भव छ भनेर जनमुक्ति पार्टीले पहिलो पटक भनेका थिए। भाषा, धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्न नेपाल भरि रहेका आम नेपाली जनताहरूलाई समान अधिकार छ कि छैन रु त्यो चाहे ब्राम्हण होस् या जनजाति या मैथली या थारू या क्षेत्री या दलित या मुस्लिम या कुनै ( सबै सबैलाई आ(आफ्ना भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसको प्रत्याभूत गर्न पहिचान सहितको सङ्घीय व्यवस्थाले मात्रै सम्भव छ भनेर जनमुक्ति पार्टीले भनेका छन्। सबै सबैका भाषा, संस्कृति र धर्मको रक्षा गर्न चाहने पार्टी कसरी जातीय पार्टी हुन्छ रु एकात्मक शैलेको समाजवाद दर्शन बोकेको देशकै सबैभन्दा पुरानो पार्टीले २०४६ साल पछि सबै भन्दा बढी सत्ताको स्वाद चाखेको छ।
देशको विकासमा कायापलट गर्ने अवसर र मौका त्यो पार्टीले पायो । सबै भन्दा ठुला र पुराना साम्यवादी पार्टीहरूले सत्ताको स्वाद पटक पटक चाखी सके । त्यसका नेतृत्वहरू सम्पन्न भए, काठमाडौँमा महल ठडाए र अहिले तिनीहरू विलासिताका जीवन बिताई रहेका छन्। त्यस्तो पार्टी र तिनका नेताहरू कसरी साम्यवादी पार्टी हुन सक्छ रु नेपाल भन्दा धेरै पछि मात्रै लोकतन्त्र प्राप्त गरेका देशहरू आज विश्व कै शक्तिशाली राष्ट्रमा दर्ज भईसकेका छन् । तर, नेपाल सम्पन्न र समृद्धिको कुरा धेरै टाढाको बिषय भयो ( आम नेपाली जनताहरू जातीय मुक्तिबाट माथि उठ्नसम्म पनि सकेन।
बर्गीय मुक्तिबाट पनि माथि उठ्न सकेन। जनमुक्तिले के अहिले सम्म सत्ताको स्वाद चाखेको छ रु नेपाललाई विश्व कै गरिब राष्ट्रमा दर्ज गराउने के जनमुक्ति पार्टी नै हो रु के जनमुक्ति पार्टीले नेपालको नदीनालाहरू भारतलाई बेचेको छ रु भारतसँग राष्ट्रघाती सम्झौताहरू के जनमुक्ति पार्टीले गरेको हो रु जनमुक्ति कै कारणले के दश बर्षे जनयुद्ध भएको हो रु १७ हजार नेपाली यूवा यूवतीहरू सहादत हुनु परेको कारक के जनमुक्ति पार्टी हो रु हजारौं नेपाली जनताहरू बेपत्ता पारिए, के त्यो जनमुक्ति पार्टीको कारणले हो रु पचास लाख यूवाहरू देशमा बेरोजगारको कारणले विभिन्न देशहरूमा श्रम गर्न र गुलामी बन्न पुगेका छन् ( के त्यो जनमुक्ति पार्टीले गर्दा हो रु जनमुक्ति पार्टीले अहिलेसम्म नेपाली समाज र राष्ट्रलाई नै हानी हुने खालको के राष्ट्रघाती काम गरेको छ र यो पार्टीलाई आम नेपाली जनताले विश्वास नगर्नु पर्ने रु सङ्घीय जनमुक्ति पार्टी आम नेपाली जनताहरूलाई अधिकार दिलाउने एक मात्र पुरानो र असली समाजवादी पार्टी हो।
यसले अहिलेसम्म कुनै पनि अराष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती कार्य गरेको छैन। जातीय र बर्गीय रूपमा ९त्यो जुन सुकै जात र समूदाय किन नहोस्० उत्पीडनमा पारिएका आम नेपाली जनताको पक्षमा यो पार्टी प्रतिवद्ध छ। विभेदरहित नीतिको अनुशरण गरेको छ। एकाधिकारवादलाई समाप्त पारेर समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। राष्ट्र भित्र बसोबास गर्ने प्रत्यक नेपाली नागरिकको भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई समान रूपमा सम्मान गरेको छ। सबै सबैलाई समान किसिमको अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने प्रतिवद्ध छ, जसले मात्रै नेपालमा स्थायी शान्ति हुने र स्थायी शान्तिले मात्रै देश समृद्धितिर उन्मूख हुने भएको हुँदा मैले १७ बर्षको राजनीतिक बिश्राम पछि सङ्घीय जनमुक्ति पार्टीमा समाहित हुने निर्णय गरेँ।
बचेकुचेको मेरो बाँकि जीवन आम नेपाली जनता, समाज र सिङ्गो राष्ट्रको लागि बिना पूर्वाग्रह, पक्षपात रहित, निश्वार्थ र स्वयंसेवकको रूपमा पार्टीमा रहेर नेपाली जनता र राष्ट्र कै पक्षमा समर्पित हुनेछु। अवसरको राजनीतिलाई निरुत्साहित पार्दै सबै सबै पक्षको समान अधिकारको लागि समाज र राष्ट्रको समृद्धिको लागि समर्पित सिपाही नै असल राजनीतिज्ञको बिशेषता हो भन्ने सिद्धान्तलाई सबै राजनीतिक कर्मीहरूले आत्मसात गरौँ।
लेखक सङ्घीय जनमुक्ति मञ्च साउदी अरेवीयाका अध्यक्ष हुन् ।
Last Updated on Saturday, 02 April 2016 13:38
कुनै वेलाका अर्थमन्त्री क.अनन्त १/२ दिन अगाडि रोल्पा आएछन । एमाओवादीको आयोजनामा सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई वटुलवाटुल पारी जिल्लाको विकासको गतिविधिवारे क.अनन्तले वुझ्ने काम गरे रे । योभन्दा एकदिन अगाडि पनि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई वटुल्न लगाई जिल्लाको अवस्थावारे वुझ्ने काम भयो रे । यी दुवै पार्टीहरु यसप्रकारको काम गर्नमा तछाडमछाड गरेको पाइयो ।
सार्वजनिक पदधारण नगरेको व्यक्ति तथा पार्टीको आयोजनामा हुने यसप्रकारको गतिविधि कति उचित या अनुचित ? यी सवै पेटभित्र लुकेको छ । म ठान्छु यो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । राजनीतिक भ्रष्टाचारको धर्म हो जनताको सार्वभौमिकताको स्वरुपलाई क्षयीकरण गर्दै लैजाने । त्यसैले उनीहरुको यो काम वेइमानीले भरिपूर्ण छ ।
कार्यक्रममा अनन्तले भने रे, “राजनीतिक क्रान्तिको अभिभारा पूरा भयो अव समाजवादी क्रान्तिको थालनी गर्नुपर्छ र त्यो काम एमाओवादीले मात्र गर्छ ।” उनको यो भनाई वैचारिक कुरा हो । वैचारिक कुरा गर्न सवैलाई स्वतन्त्रता छ । तर यो भनाई उनको मनभित्रको ज्ञानले देख्यो या गाइडेड । हामीले छुट्टयाउन खोजेको गाँठी कुरा यो हो ।
समाजवादी क्रान्ति भनेको आर्थिक रुपले डुव्लाएका जनतालाई मोटो वनाउने संकल्पको तयारी । भनौं यो क्रान्तिको तेश्रो चरण हो । आर्थिक रुपले पहिलो विश्वशक्ति अमेरिकाको ‘नेटिभ अमेरिकन’ जसलाई हामी ‘रेड इन्डियन’ भन्छौं उनीहरु राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा वेखवर हुन्छन । यद्यपि उनीहरु आइएलओ १६९ खाएर वसेका छन तर राजनीतिक रुपमा जागेको दखिएन । ठिक त्यसैगरी क.अनन्त र माधवकुमार नेपालले रोल्पाका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई वोलाई राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्दा पनि यहाँका जनता वेखवर छन । यसको अर्थ नेपालमा पनि रेड इन्डियनहरुको वाक्लो वस्ती रहेछ भन्ने वुझिन्छ ।
क.अनन्त जुन धरातलमा छन त्यो धरातललाई समाजवादी कि सामाजिक क्रान्ति ? हामी राजनीतिक रुपमा इमान्दार छैंभने वहसमा उत्रिनुपर्छ । हैभने मान्छेको जुन विकासक्रम छ त्यसमा वाझो हाल्नु हुदैन । गाइडेडवाट चल्नु सवैभन्दा खतरापूर्ण हुन्छ । यो ज्ञानको कुरा हो ।
१४ चैत २०७२
Last Updated on Sunday, 27 March 2016 16:53
Last Updated on Saturday, 13 February 2016 14:12
Last Updated on Sunday, 06 March 2016 14:43
सच्चा सहीदलाई १३९ बर्षपछी सहि सम्मान
बिजय हितान ,
सती प्रथा उहिल्लै हटे पनि नेपाललाई सतिले सरापेको देश भनिन्छ । सहिद लखन थापामगरलाई राज्यले प्रथम सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेकाहरु पनि नेपाल सहिदले सरापेको देश भन्थे ।अन्तत्व ढिलै भए पनि एक कर्मठ सहिदलाइ पहिचान गर्दै राज्यले ठुलो सम्मान टक्र्याएको छ । २०७२ असोज ३ गते सरकारद्वारा नयाँ संबिधान घोषणा गर्नुको साथै सहिद लखन थापामगरलाई १३९ बर्षपछी नेपालको प्रथम सहिदको पगरी गुठाइएको छ । ईतिहासमा तिरस्क्रित शहीद एक युगपछी बल्लबल्ल यसरी पुरस्क्रित भए । अब सरापहरु सप्पै हटेर आसिर्बाद लाग्छ कि नेपाल आमालाई कतै !
लखनले राणाशासन बिरुद्द गोर्खाको बुङकोटमा जनबिद्रोहको तयारी गरेका थिए । त्याँहाका स्थानिय बुढाहरु भन्थे- लखन जोसमनी धर्म गुरु थिए, औतारी थिए, र उनले चिताएको पुग्थ्यो । जंगबहादुरले लखनलाई मृत्युदण्द दिएपछी 'त जंगे पनि मेरो मृत्युको सातदिन पछी मर्छस' भनी सराप दिएका थिए रे । १८ फेब्रुअरी १८७७ मा लखनलाई झुन्डाइएर मारियो भने त्यसै महिनाको २५ तारिख जंगबहादुरको पनि रहस्यमय ढंगले मृत्यु भयो । उपन्यास 'सेतो बाघ' मा जंगबहादुरको मृत्यु एक सेतो बाघको टोकाइबाट हुनसक्ने चित्रण गरिएको छ । उक्त सेतो बाघ भनेर तिनै लखनलाई सङ्केत गरिएको हुनसक्छ । अर्को जनधारणा के पनि छ भने जंगबहादुर जनजातिका छोरी-चेली माथि आँखा लगाउँथे ।
एक मगरको श्रीमतीसँग सुतेको भेटेपछी तिनको पोइले जार भनेर जंगबहादुरलाई छप्टाइदिएको भन्ने जनश्रुती सुनिन्छ । तिनै काट्ने ब्यक्तिलाई उपन्यासमा 'सेतो बाघ' को सङ्ग्या दिइएको आसङ्का गर्नसकिन्छ ।
प्रथम सहिदको घोषणा एकदमै सम्बेदनसिल घडीमा गरिएको छ । यसले नेपालको भाबी राजनैतिक छितिज नै अर्कै दिशातिर मोडिनसक्ने भनेर पहिचानबादिहरु आसङ्कित देखिन्छन । केही पाउन केही त गुमाउनै पर्छ । मगरात प्रदेशलाई चारतिर बिखण्डन गरिने गरी संबिधान घोषणा गरेपछी मगरात आन्दोलनकर्तालाई मुखमा बुझो लगाउन प्रथम सहिदको घोषणा गरिएको तत्थ्यलाई नकार्न सकिन्न । त्यसो त अैलेसम्म राज्यसत्ताद्वारा अपहेलित र मरणासन्न खपाङ्गिलाई स्वयम प्रधानमन्त्रि के पि वोली भेटन गएर उपचार्थ उल्लेखनिय आर्थिक सहयोग प्रदान गरिनुलाई पनी एक राजनैतिक गोटी चालिएको भनेर भन्न सकिन्छ ।
उपन्यासमा कल्पना गरिएका ति सेता बाघहरु जागेर लखनलाई प्रथम सहिद बनाउन अहिलेसम्म सङ्घर्षपूर्ण लँडाइ लडे । तिनै सेता बाघहरुको मद्दतले जनयुद्द मार्फत राजातन्त्र जस्तो बलियो पर्खाललाई भत्काएर संघियताको स्थापना सम्भव भयो । अब फेरी तिनै सेता बाघहरु अैलेको राज्यसत्तामा एकल जातिय पक्कडलाई फितलो न पारुन भन्नका खातिर लखनलाई प्रथम सहिद घोषणा गरिदिएर रणनितिको बल्छी फालेको बुझिन्छ । २०६२/६३ को जस्तो सत्ता परिवर्तन गराउने खालको जनआन्दोलन फेरी न दोहरियोस भन्ने उद्देस्यले पनि यस्तो पासा फालिएको हुनसक्छ ।
लखनलाई नेपालको प्रथम सहिद घोषणा गरिनु एक ऐतिहासिक निर्णय थियो । यसका सङ्कास्पद अनी नकारात्मक मात्रै होइनन सकारात्मक पक्ष पनि छन । एक सिक्काका दुई पाटा त हुन्छन नै । सङ्ख्याले गणितमा मात्रै होइन राजनीतिमा पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आदिबासी जनजाती मध्ये मगर जाती जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो समुदाय हो । जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र भनेर हालै संबिधान संसोधन गरिएको अवस्थामा यसले बिशेष भूमिका खेल्नेछ । संघियता, समाबेसि र पहिचान जस्ता मुद्दाहरुको सबैभन्दा पहिला मुल फुटाउने खपाङी, हितान, एम एस, सुरेश, बमकुमारी जस्ता पुराना पुस्ताका मगर नेताहरु हुन । त्यसलाई निरन्तरता दिएका नयाँ पिंडिका नेताहरु शिवलाल, रामबहादुर, नन्दकिशोर, बर्षमान, ओनसरी, महेन्द्र इत्यादी हुन । हालै जारी प्रथम सहिद घोषणा तिनै मगर नेताहरुको पनि सम्मान हो भनेर लिन सकिन्छ । फल्सरुप सरकारले गरेको यो निर्णयलाई समाबेसिय राज्यसत्ता प्रणालिको सुरुवात मान्न सकिन्छ । यसरी चालिएको पाइलालाई सङ्कास्पद तरिकाले हेरिनु भन्दा हालै घोषित संबिधानको कार्यनयनको प्रारम्भ हो भनेर जान्दा सबैको भलाई हुन्छ ।
लखनलाई प्रथम सहिदको श्रिपेच पहिराउन पर्छ भन्दै बर्षौं अघिदेखी थुप्रै ब्यक्ती तथा संघसंस्थाहरु खटिए । यस घोषणाको अर्को फाईदा भनेको ति आन्दोलनकर्ताहरुले राहत प्राप्त भएको महसुस हो । सुरुमा सिमित समुदाय मात्रैका सम्पत्ति ठानिएका लखनलाई यस राष्ट्रिय सम्मानपस्चात सम्पूर्ण नेपालिको बिभुती भएको महसुस गरिएको छ । यसले सबैलाई आत्म सन्तुष्टी प्रदान गरेको छ । यस निर्णायक घडीले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सुत्रमा बाँधने काम गर्नेछ भनेर आशाबादी हुन जरुरी देखिन्छ ।
तर यो सम्मान सजिलै भने पाइएको अवस्य होइन । एकपछी अर्का सरकारलाई दबाब दिने सङ्घर्षपूर्ण कार्यक्रमहरु नभएकाभए यो सम्भव थिएन । यसको श्रेय देस बिदेसमा छरिएर रहेका बिभिन्न ब्यक्ती तथा संगठनहरुलाई जान्छ । २०६५ मा स्थापित प्रथम सहिद लखन थापामगर प्रतिस्ठानले छोटो कार्यकालमा थुप्रै जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु ल्यायो । स्मृति दिवस मनाउने, स्मारिका प्रकाशन गराउने, बुङ्क्कोटमा लखनको नाममा स्कुल स्थापना र स्मारक निर्माण गर्ने, सांसद र अन्य बिग्यहरुमाझ अन्तर्कृया गर्ने बिभिन्न कृयाकलापहरु गरिए । रोल्पाको थबाङलाई जन आन्दोलनको अखाडा मानिए जस्तै गोर्खाको बुङ्कोटलाई लखन बिद्रोहको जन्मभुमी भनेर चिनिन्छ । बुङ्कोटको काउले-भङगार टोलमा लखनले किल्ला निर्माण गरेर २००० युवालाई सैनिक तालिम दिएका थिए । यस्तो ऐतिहासिक स्थानलाई सम्रक्षण र सम्बर्धन गर्दै पर्यटकिय क्षेत्रमा बिकास गर्ने अवधारणा लिएर प्रतिस्ठानले एक परीयोजनाको खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझायो ।
त्यसैगरी नेपाल मगर संघ र देस बिदेसमा रहेका यसका भात्रिसंस्थाहरुले बिभिन्न कार्यक्रम मार्फत जनमानसमा लखनको निस्वार्थपूर्ण र साहसिक देनलाई चिनाउने प्रयास गरे । बेलायत मगर संघले बर्षेनी लखन फुटबल कप खेलाउछ र लखन स्मृति दिवस मनाउछ । तर सन २०१२ देखी आदिबासी जनजाती महासंघ बेलायतले नेपालबाट जनजाती नेता झिकाएर र नेपाली राजादुत जस्ता बिशेष ब्यक्तीमाझ स्मृति दिवस मनाउन लाग्यो । यसबर्ष त महासंघले पहिलोपल्ट नेपाली राजदुतावासमै लखनलाई सम्झने कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ । प्रतेक बर्ष राजादुतावसमा लखनलाई प्रथमा सहिद घोषणा गरिन पर्छ भनी निरन्तर ग्यापन पत्र बुझाइँदै आइएको छ । यसरी महासंघको छत्रछायाँमा यसले ब्रिहत प्रचारप्रसार पाउंदै आएको छ । अन्य राष्ट्रहरुमा पनि मगर संघ र आदिबासी जनजाती महासंघको सहकार्यमा यस्ता कृयाकलाप गरेको पाईन्छ ।
क्रमश लखनलाई पहिलो सहिद घोषणा गरिनुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन र सँसदमा बहस चल्न थाल्यो । पोखरामा तात्कालिन कास्की जिल्ला मगर संघका अध्यक्षको मातहतमा लखनको सालीक ठडाउने निकै शाहसिक कार्य भयो । त्यसैगरी बुटवल र पाल्पामा पनि लखनको मुर्ती स्थापना भयो । सांसद शिवलाल थापामगरले संबिधान सभामा लखनलाई प्रथम सहीद घोषणा गरिन पर्छ भनी प्रस्ताव ल्याइ सर्बसम्मबाट पारीत गराउनु भयो । सरकारसँग बिरोधाभास राख्नुभन्दा सहकार्य गरे केही पाइंदो रहेछ भन्ने यो एक ज्वालन्त उदाहरण हो । अर्को तिर बौदिक छेत्रका मानिसहरु लखनको बारेमा ऐतिहासिक खोजी र मेडिया क्याम्पेन जारी राखे । देसी बिदेसी विश्वाबिद्यालयका विद्यार्थीहरुले यस बिषयमा शोधपत्र पेश गर्नथाले । ड हर्षबहादुर बुढाले लखनको जीवनमा आधारित खोजपूर्ण पहिलो किताब प्रकासित गरे एता ५ - ७ अरु किताबहरु बजारमा निस्किसकेका छन । यि पुस्तकहरुले लखन एक सहीद त थिए नै यद्धपी प्रथम शहीद पनि हुन भन्ने बलिया प्रमाणहरु पेश गरे ।
यसरी प्राप्त सफलताको श्रेय हामी माझ मात्रै बाँडने होइन । लखन सँगै शहादत प्राप्त गरेका उनका सहयोगिहरु- जयसिङ चुमीमगर्, सुकदेव गुरुङ, सुपती गुरुङ्, ज्ञान दिलदास्, कानु लम्साल साथै २००० फौजी युवाहरू, स्थानिय समुदाय इत्यादिले दिएको योगदानलाई पनि यस पुनित घडीमा सम्झनु पर्छ । लखनले सुत्रपात गरेको भौतिक आन्दोलनलाई त बन्दुकले दबाइयो तर यसको गहिरो छाप त्यसपछिका नेपाली जनतामा गढिनै रह्यो । फल्सरुप धन्दै ६० बर्ष पछी चार सहीदहरु- धर्मभक्त, गंगालाल, सुक्रराज, दसरथको सहादतपस्चात नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भइ नै छोड्यो । यि महान ब्याक्तिहरुलाई पनि भुल्न भएन ।
लखन प्रति अब हाम्रो सच्चा स्रदान्जली भनेको- प्रतिस्ठानलाई बैधानिक मान्यता प्रदान गरी सरकारी कोषको स्थापना, बुङ्कोट परीयोजनालाई यथासिघ्र कार्यनयन अनी हामी सबै बुङ्कोट भ्रमण गरी त्याँहाको साक्षात अनुभव बटुल्नु हो जस्तो मलाई लागेको छ ।
Last Updated on Thursday, 04 February 2016 22:01
भोजराज बाहुनले बिभाजित गरेका थिए गुरुङहरुलाइ चार र सोह्र जातमा
लाहुरेको रेलिमै फेसनै राम्रो -कथा
ल्होसार के हो ?कसरी मनाइन्छ ? तमु ल्होसारको नाली बेली
खस जाती र प्रक्रिती पुज्ने उधौली पर्बको सम्बन्ध